ပစ္စည်းကိရိယာ၏ရှေးခယျြမှု, ဝယ်ယူ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Topic: ပစ္စည်းကိရိယာ၏ရှေးခယျြမှု, ဝယ်ယူ
entry-level DSLR အနေဖြင့် Full-frame ကို DSLR အကြားခြားနားချက်? +
Full-frame DSLR နှင့် entry-level DSLR အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။ + ၆၀ ကနေ ၄၅ ဒီဂရီရှိတဲ့ matrix ကင်မရာတွေပါရှိပြီး M. Afanasenkov ရဲ့ "ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ပတ်သက်သောဓာတ်ပုံ" ဆောင်းပါးကို Google ကိုသင်တတ်နိုင်သလောက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဲဒီမှာလူတိုင်း ...
ညှိနှိုင်းမှုဆိုသည်မှာစံကိုက်ညှိခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ပိုမိုတိကျစွာ http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=110 အီးသည်မှန်ဘီလူးအရည်အသွေးနှင့်မကိုက်ညီပါကညှိနှိုင်းခြင်းမပြုရ။ ပြန်ပို့ပါ။ (ဂျာမန်တရားသူကြီးမှအတည်ပြုရန်) စစ်ဆေးပြီး ...
လီသီယမ် Li-ion AA ကို format နဲ့ဘက်ထရီ 1.2-1.5V တစ်ဗို့အားရှိ rechargeable ဖြစ်ပါသလား
1.2-1.5V AA ရှိအားပြန်သွင်းနိုင်သည့် lithium Li-ion ဘက်ထရီများရှိပါသလား။ မဟုတ်ပါ၊ မတည်ရှိပါ။ Li-Ion ဘက်ထရီများသည်ဆဲလ်ဗို့အား 3,7V ရှိပြီး၎င်းကိုလျော့နည်းစေရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ ဟုတ်တယ်၊ ငါကြားတယ် ...
ပျမ်းမျှ Zenit-E ကင်မရာဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။ ဒီမှာကင်မရာကိုချိတ်ဆက်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ toပြီ ၁ ရက်သတင်းက ... ငါကိုယ်တိုင် CANON EOS 1 ကိုအသုံးပြုသည်။ ယခုသင်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
အဘယ်အရာကိုကကင်မရာထဲမှာ 1 / 2.3 ခင်းကျင်းဆိုလိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကအကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း? ပဲဘာ matrix ကိုပိုကောင်းပါသလဲ
1 / 2.3 Matrix သည်ကင်မရာတွင်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း၊ ၎င်းသည်အဘယ်အရာကိုသက်ရောက်သနည်း။ ဘယ် matrix ကပိုကောင်းတာလဲ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အားလပ်ရက်များ! ၁ / ၂.၃ သည်အသေးငယ်ဆုံးမဟုတ်သေးပါ၊ သင်ဘာရေးသနည်း။ သူမသည် ...
အဘယ်အရာကို AA ကို penlight ဘက်ထရီအကောင်းဆုံး?
ဘယ် AA ဘက်ထရီတွေကအကောင်းဆုံးလဲ? Varta, Sanyo, Energizer, Duracell တို့ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာထားရန်လိုအပ်လျှင် Varta R2U 2300 mahah ကိုယူရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့သည်တစ်နှစ်အတွင်းစွမ်းရည်၏ ၁၅ မှ ၂၅% သာဆုံးရှုံးသည်။
Canon PowerShot sx410 နှင့်ဆန့်ကျင်ကင်မရာ၏ရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူကိုကူညီပါမိတ်ဆွေတို့ကို DSLR ကင်မရာမနှောက်ယှက်ပါသည်:
Canon powershot sx410 အတွက်နှင့်ကင်မရာကိုရွေးချယ်ရာတွင်ကူညီရန်မှာ DSLR ပရိသတ်များဖြစ်သည်။ စိတ်ရှုပ်စရာမလိုပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးရွေးချယ်ရန်မှာအရည်အသွေးမြင့်သည့်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများဖြစ်သည်။
အဲဒါကိုပုံမှန်ကနေမတူပုံကိုအဘယျသို့ wide-angle lens ကိုဆိုလိုခြင်းနှင့်ပေ ???
ကျယ်ပြန့်သောထောင့်မှန်ဘီလူးကဘာကိုဆိုလိုသနည်း၊ ၎င်းသည်ပုံမှန်မှန်ဘီလူးနှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။ Fixed focal မှန်ဘီလူးသည်ရှုထောင့်အရကွဲပြားမှုရှိသည်။ ကျယ်ပြန့်ထောင့်မျက်ကပ်မှန်။ ထိုကဲ့သို့သောမှန်ဘီလူးများ၏မြင်ကွင်းထောင့်သည်ဒီဂရီ ၆၀ ကျော် (focal length အထိ ...
AA ကိုဘက်ထရီနှင့် LR6 HR6 ။ ခြားနားချက်ကဘာလဲ?
AA ဘက်ထရီ LR6 နှင့် HR6 ။ ခြားနားချက်ကဘာလဲ HR6 သည်ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သောဘက္ထရီတစ်ခုဖြစ်သည် LR6 သည်မအားပြန်သွင်းနိုင်သည့်အယ်ကာလိုင်းဘက်ထရီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပထမ၏ပထမလည်ပတ်မှု voltage သည်ဒုတိယ ၁.၅ volt အတွက် ၁.၂ Volts ဖြစ်သည်။ အဘို့…
Canon ၏ 600D အတွက်တံခါးဝပြေးစစ်ဆေးဖို့ဘယ်လို ??
Canon 600D တွင်ရှပ်တာမိုင်အကွာအဝေးကိုမည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း။ rakso The Thinker (၈၇၆၅) သည်မှားယွင်းသောအဖြေကိုပေးခဲ့သည်။ Sun သည်သူ၏ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးရလဒ်မှာအခမဲ့ပရိုဂရမ် EOSinfo ဖြစ်သည်။ rakso အကြံဥာဏ်၊ IExplorer မှတဆင့်ကြိုးစားသည်။
အိုင်ဖုန်း 5S အပေါ်ဗီဒီယိုနှင့်အတူအသံမ
iPhone 5S တွင်အသံနှင့်အသံမရှိပါ။ အလွန်ဝမ်းနည်းပါသည်။ ကြည့်စမ်း၊ မင်းအသံမဲ့နေတာပေါ့။ ဖုန်းနောက်ဖက်က chip ကိုဖယ်လိုက်ရုံပဲဒါကပြsolနာပဲ။
USB-> FireWire adapters များရှိပါသလား။
USB-> FireWire adapters များရှိပါသလား။ နည်းပညာပိုင်းအရမဖြစ်နိုင် ငါထင်သည်မှာဂဟေအဆက်အသွယ်အဆင့်တွင်၊ ၁၃၉၉ မှတိုက်ရိုက် Schaub နှင့် USB ၌ဖြစ်သည်။ IMHO နတ်သမီးပုံပြင်အားလုံးသည် voltage ဗို့မှပရိုတိုကောသို့ကွဲပြားသည်။
အဆိုပါကိရိယာအစုံမှန်ဘီလူးကဘာလဲ? အဘယ်ကြောင့်ဝေလငါးဟုခေါ်တွင်သည်, Canon EOS 450 ဃကိုယ်ခန္ဓာအဘို့မျက်ကပ်မှန်ကိုတက်ကောက်ဖို့အဘယ်အရာကိုပိုကောင်း? Thank you!
ဝေလငါးမှန်ဘီလူးဆိုတာဘာလဲ။ ၎င်းကိုဝေလငါးမှန်ဘီလူးဟုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်ပြီးမည်သည့်မှန်ဘီလူးများသည် Canon eos 450dbody အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7605 Kit - set (English) ။ ကိရိယာသည်ကင်မရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
U1 U3 နှင့်ကဒ်ပြား၏ပုံစံများဖြင့်မဆိုခြားနားချက် 4K ကဗီဒီယို Panasonoc G7 ဘို့အရေးကြီးသနည်း
U1 နှင့် U3 သည်ကဒ်ပြားများ၏ကွာခြားမှုသည် Panasonoc G4 7K ဗီဒီယိုအတွက်အရေးကြီးပါသလား။ ဘာကြောင့်မှန်းလဲ အကောင်းဆုံးကိုယူပါ၊ သိမ်းဆည်းခြင်းသည်အမြတ်အစွန်းမဟုတ်ပါ။ စံနှင့်အညီ UHS အတန်းအစား * နိမ့်ဆုံး * အမြန်နှုန်းကိုသတ်မှတ်သည်။
ကျွန်မကင်မရာကိုဝယ်ဖို့ချင်တယ်။ ကောင်းသော, ဒါပေမယ့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့။ ဒါကြောင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံဆီသို့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုယူ, စကားပြောဆိုရန်။
ကျွန်တော်ကင်မရာဝယ်ချင်ပါတယ် ကောင်းပေမယ့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့။ ပြောရရင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံပညာကို ဦး တည်တဲ့ပထမဆုံးအဆင့်ကိုယူပါ။ အကယ်၍ ဤသည်မှာသင်၏ပထမဆုံးဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာဖြစ်ပြီးသင်ဓါတ်ပုံများတွင်ငွေရှာရန်ထွက်မလာပါက၊ မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို ၀ ယ်ပါ။
Epson stylus ဓာတ်ပုံ RX610 ပရင်တာတွင်နင့်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း။ အရာတစ်ခုကိုဖယ်ရှား, nozzle ခေါင်းကိုအတွင်း၌ကြည့်ပါ။ (တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်မရှိသော) တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်များကိုယူပါ၊ ဆေးရည်မှရေပိုက်များကိုဖြတ်ပါ။ ၅ ကိုကြည့်ပါ။
USM မှန်ဘီလူးကဘာလဲ။ STM မှန်ဘီလူးကဘာလဲ? USM မှန်ဘီလူးသည် STM နှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
USM မှန်ဘီလူးကဘာလဲ။ STM မှန်ဘီလူးကဘာလဲ? USM မှန်ဘီလူးသည် STM နှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။ ပို၍ ကောင်းမွန်သော Canon ... ultrasonic drive ရှိသောမှန်ဘီလူးများကို USM ၏အတိုကောက်အားဖြင့်မှတ်သားထားသည်။ Ultrasonic drive ကိုစနစ် ...
selfie များအတွက် monopod ဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ဘယ်လိုစွဲချက်တင်သို့မဟုတ်မခဲ့?
Selfie ချောင်းကိုအားသွင်းနေမနေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲ။ ငါအားသွင်းထားတယ်၊ LED ကအနီရောင်ပြောင်းသွားတယ်၊ ၁၀ စက္ကန့်အကြာမှာ LED မီးထွက်ပြီး monopod ကအားမသွင်းပါဘူး။ ဘာလုပ်မလဲ? ညွှန်ကြားချက်အရအများဆုံးအချိန် ...
ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရန်အတွက်မည်သည့်ကင်မရာသည်ပိုကောင်းသနည်း။ ၁၅-၂၀,၀၀၀ ကိုထည့်ပြီး Sony NEX VG15E ကိုဝယ်ပါ။ နှင့်ပုံဘယ်တော့မှလိမ့်မည် ... သည် ...
ဒါဟာ illumination Lux တစ်ယူနစ်အဖြစ်ရပ်တည်?
ဘယ်လို Lux ၏ illumination ၏ယူနစ်ရပ်သလဲ? ဗွီဒီယိုကင်မရာများတွင်ဤ parameter သည်ထိုကဲ့သို့သောအလင်းအခြေအနေများတွင်သတ်မှတ်ထားသောဆူညံသံအဆင့်နှင့်အတူဗွီဒီယိုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ကိုညွှန်ပြသည်။ ဒီအဆင့်ကဘာလဲ - မတူညီတဲ့ကင်မရာတွေအတွက်ကုမ္ပဏီတိုင်း ...
55 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,600 စက္ကန့်ကျော် Generate ။